Daroogooyinka adag ma sharci bay ka noqon doonaan magaalada Vancouver dhawaan? • Dawooyinka Inc.eu
Cabaar bay hawada ku jirtay. The dagaalka daroogada waxay ku kacdaa balaayiin waxna ma xaliyo. Sidaa darteed golaha magaalada Vancouver ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay siyaasada daroogada adag ee la isku haysto. Haysashada daroogo yar, oo ay ka mid yihiin kookeyn, meth iyo heroin, lama ciqaabi doono mar dambe haddii ay u taalo golaha magaalada.
Si kastaba ha noqotee, qorshahan golaha magaalada ayaan wali ansixin dowladda Kanada. Qorshahan, Duqa Steward wuxuu diiradda saarayaa habka daroogada ee xoogga saaraya caafimaadka. Go'aankani wuxuu yimi ka dib markii uu heerkii ugu sarreeyay gaadhay tirada xad dhaafka ah ee magaalada. Bishii Abriil 2016, xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay British Columbia, oo ah gobolka uu ku yaallo Vancouver, sababo la xiriira tirada daroogada oo aad u badan. Bishii Oktoobar, waxaa jiray 162 dhimasho xad dhaaf ah oo ka dhacday gobolka. Waqooyiga Ameerika waxay kujirtaa silica cudurka faafa ee opioid Vancouver waa caasimada Canada xad dhaafka ah
Taageerayaasha dib u habaynta daroogada
Tallaabadan ayaa waxaa soo dhoweeyay dadka u ololeeya dib-u-habeynta daroogada, kuwaas oo ku doodaya in dambiile ka dhigista isticmaalka daroogada ay tahay mid aan waxtar lahayn oo qaali ah. Raiisel wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa bishii Sebtember sheegay inuusan raali ka ahayn in laga takooro daroogada. "Uma maleynayo inay jirto hal daawo oo lagu xaliyo dhibaatooyinka noocan oo kale ah," ayuu yiri Trudeau.
Vancouver waxay qorsheyneysaa inay xukun ka dhigto haysashada daroogooyinka adag sida hirowiinka iyo maandooriyaha maandooriyaha maandooriyaha loo yaqaan 'cocaine' ka dib markii sanadkii la diiwaan galiyay dhimashada xad dhaafka ah. Kennedy Stewart, duqa magaalada ayaa yiri "Lahaanshaha shaqsi ahaaneed iyo isticmaalka daroogada ma ahan arin dambi, waa arin caafimaad."
thetimes.co.uk (Source, EN)
In kabadan $ 80 milyan oo MDMA ah oo laga helay qodista qodista
Shan nin ayaa lagu xiray Sydney iyo London ka dib hawlgal boolis caalami ah oo culeyskiisu yahay 450 kg oo ka baxsan ...
Sephora waxay soosaaraysaa qaybta "Cannabis Beauty" oo leh alaab ay ku jirto CBD
Waxyaabaha ay ku jiraan CBD waxay sii kordhayaan soosaarka warshadaha qurxinta. CBD, walax aan cilmi nafsi ahayn ...
Baro inta CBD ay tahay inaad qaadato Microdosing
Haddii aad la xanuunsato hurdo la'aan, aad ka walwalsan tahay, aad leedahay xanuun joogto ah ama lagugu helay ...